Halothane (ဟေလိုသိန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Halothane (ဟေလိုသိန်း)
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Halothane (ဟေလိုသိန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Halothane ကို မေ့ဆေး သွင်းရန်နှင့် မေ့ဆေး ဆက်လက် တည်မြဲနေစေရန် ပေးပါသည်။
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ပါးစပ်မှသောက်ပါ။ ဆေး၏ အထုပ်တွင်ပါသော ညွှန်ကြားချက်များ အားလုံးကို လိုက်နာပါ။
အချက်အလက်အချို့ကို မသေချာပါက ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Halothane ကို အခန်းအပူချိန်တွင် တိုက်ရိုက်အလင်း နှင့် စိုထိုင်းမှုတို့မှ ကင်းဝေးအောင် သိမ်းဆည်းရမည်။ ဆေးပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် Halothane ကို ရေချိုးခန်း သို့မဟုတ် ရေခဲ သေတ္တာတွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
Halothane တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် ပတ်သက်သော ညွှန်ကြားချက်များအတွက် ဆေး၏ ဘူးကို အမြဲစစ်ရန် အရေး ကြီးသည်။ သို့မဟုတ် ဆေးရောင်းသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ဆေးများအားလုံးကို ကလေးနှင့် အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်များမှ ဝေးရာနေရာတွင် ထားပါ။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Halothane ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Halothane (ဟေလိုသိန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Halothane ကို မသုံးမီ သင့်တွင် အောက်ပါတို့ရှိပါက ဆရာဝန်ကို ပြောပြပါ။
Halothane ပါသော အရာများကို ဓါတ်မတည့်ခြင်း
အခြား ကျန်းမာရေး အခြေအနေများရှိခြင်း၊ Halothane နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်သော ဆေးများ သုံးခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Halothane (ဟေလိုသိန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Halothane သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Halothane မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင် ပါ။ Halothane သည် US အစားအစာ နှင့် ဆေးဝါး စီမံခန့်ခွဲရေး (FDA) အရကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အန္တရာယ်တွင် အဆင့် C ဖြစ်သည်။
ဤဆေးသည် နို့မှ စွန့်ထုတ်သလားကို မသိရှိပါ။ ဆေး များစွာသည် နို့မှ စွန့်ထုတ်သောကြောင့် နို့တိုက်မိခင်သည် Halothane သောက်နေပါက သတိထားသင့်သည်။
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဘယ်ဆေးတွေက Halothane (ဟေလိုသိန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Halothane သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Halothane (ဟေလိုသိန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Halothane သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Halothane (ဟေလိုသိန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Halothane သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Halothane (ဟေလိုသိန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
စသွင်းသော ပမာဏသည် လူနာတစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ကွဲပြားသည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် ဝ.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၃ ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းဖြစ်သည်။ ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းသော ပမာဏသည် ဝ.၅ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁.၅ ရာခိုင် နှုန်းအတွင်း ဖြစ်သည်။
Halothane ကို အောက်စီဂျင် သို့မဟုတ် အောက်စီဂျင် နှင့် နှိုက်ထရိုဂျင် အောက်ဆိုဒ် အရောဖြင့် တွဲပေးနိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Halothane (ဟေလိုသိန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Halothane (ဟေလိုသိန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Halothane ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
ရှူဆေး ၂၅၀ မီလီလီတာ
Halothane သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။